Manasongadina ireo tolona sy fandresen’ny teratany ao Papua, Indonezia ny sarimihetsika tsy miankina vaovao iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 7:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Italiano, English, македонски, Español, नेपाली, 繁體中文, English
Mpandray anjara vitsivitsy tamin'ilay fetibe faharoa ho an'ny sarimihetsika tsy miankina ao Papua. Loharano: pejy Facebokk-n'ny Papuan Voices, fampiasàna nahazoana alàlana.
Nikarakara fetiben'ny sarimihetsika roa hatramin'ny 2017 ny Papuan Voices, fikambanana miaro ny lahatsary izay miorina ao Azia Atsimo-Atsinanana, mba hankalazana ireo fiainana sy tolon'ireo Teratany ao Papua ao amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Indonezia.
Tamin'ny 2015, nasongadin‘ny Global Voices voalohany ho toy ny tetikasa niarahana tamin'ny EngageMedia ny Papuan Voices, ary nandritra izany taona izany ihany, nametraka ny tenany ho toy ny fikambanana tsy miankina izay hita any amin'ny faritra enina ao Papua ankehitriny ny Papuan Voices.
Amin'ny maha toerana feno harena voajanahary azy be indrindra kanefa toerana mahantra ara-bola, namindra toerana ny teratany Papoàna maro ny firongatry ny Indoneziana maro avy amin'ny faritra hafa. Faritan'ireo Papuana sasany ho toy ny fibodoana tsy ara-dalàna izany ary angatahan-dry zareo ny fahaleovantenany amin'i Indonezia.
Sarintanin'i Papua sy ny faritany Papua adrefana ao Indonezia. Sary natolotry ny Google Map.
Ao anatin'izany toe-javatra izany, ilay fetibe voalohany an'ny sarimihetsika natao tao Papua dia nikendry ny:
mba hanasongadinana ireo olan'ny vahoaka teratany ao Papua amin'ny alalan'ny horonantsary fanadihadiana ary koa hanangana fanentanana ho an'ny daholobe mikasika ireo olana lehibe miantraika amin'izy ireo.
Sarimihetsika 30 teo no naroso, olona 50 no nandray anjara tamin'ireo atrikasa famokarana mialohan'ilay fetibe, ary sarimihetsika 10 no novokarina tamin'ny alalan'ireo atrikasa nifantoka tamin'ny tanora.
Notaomin'ny fahombiazany voalohany, nanao ny fetibe faharoa, tamin'ny volana Aogositra 2018 farany teo ho an'ny sarimihetsika, ilay fikambanana niaraka tamin'ny mpijery nihoatra ny 1.000. Naroso tamin'izany ny sarimihetsika 19 avy amin'ny faritra maro tao Papua.
Androany no andro voalohany amin'ilay atrikasa mialohan'ilay fetiben'ny sarimihetsika ao Keerom regency Papua (taorian'ny herinandro farany teo tany Jayapura) izay nokarakarain'ny vondrompiarahamonina #PapuanVoices. Mankahery ireo mpamokatra sarimihetsika eo an-toerana ireo atrikasa ireo mba hanomana sy hanolotra sarimihetsika ho an'ny #FestivalFilmsPapua2018 Mihainoa tsy tapaka mba hahafantarana bebe kokoapic.twitter.com/q4C4xk9MvX
Nilaza i Mecky Yeimo, mpandray anjara iray tamin'ilay fetiben'ny sarimihetsika, fa betsaka ny vaovao mikasika ny ady tany eo amin'ny teratany papuana sy ireo mpandraharaha nahazo ny tany eny an-toerana mba hitrandrahana sy hambolena voanio ireo sarimihetsika no nentin'ireo sarimihetsika.
Nanamarika ny maha-zava-dehibe ilay fetiben'ny sarimihetsika i Franky Samperante, talen'ny Pusaka, fikambanana teratany Indoneziana tsy miankina amin'ny fanjakana:
Ao Papua, voafetra ireo safidy hahazoana vaovao avy amin'ny olontsotra satria fehezin'ireo vondrona manjakazaka sasany ny vaovao. Hahasoa olona maro eny an-toerana, ao amin'ny firenena sy manerana izao tontolo izao, ny vaovao ao amin'ireo sarimihetsika ireo.
Samy nanasongadina ny fahasahiranana andavanandro atrehin'ireo Papoàna ny maro tamin'ireo sarimihetsika ireo.
Ohatra, horonantsary fanadihadiana novokarin'i Imanuel Hindom mikasika ny mpitondra kamiao taloha tao amina fambolena voanio tao Keerom Regency izay nahita fomba hanampiana ireo vehivavy Papoàna mpivarotra (”Mama-mama” amin'ny teny Papoàna) hahita loharanon-karena vaovao amin'ny fitaterana ny legiomany ho any amin'ny tsena vaovao ao an-drenivohitr'i Jayapura ilay nahazo ny loka Sarimihetsika Tsara Indrindra tamin'ny 2017, ny ‘Monce Truck’:
Horonantsary fanadihadiana fohy manaitra ihany koa ny ‘The Caretaker of Isio Hill Forest’ izay mitantara ny tantaran'i Alex Waisimon namadika àla maitso midadasika ho toerana fandinihana vorona malaza ho an'ny mpizahatany. Novokarin'i Asrida Elisabeth, Harun Rumbarar, Bernad Koten, ary i Yosef Levi ilay sarimihetsika.
Hatramin'ny 2011, samy efa nanofana mpamokatra sarimihetsika mihoatra ny 50 avokoa ny Papuana Voices sy ny EngageMedia ary namokatra sarimihetsika manodidina ny 100 teo ho eo izay nalefa tany amin'ny toerana mihoatra ny 50 tao anatiny sy ivelan'i Indonezia.